I-M4A to MP3 Converter - Izindlela Eziku-inthanethi Nezingaxhunyiwe ku-inthanethi - Ama-Softwares
Ungaguquguqula kanjani i-M4A ibe yi-MP3?
Umculo ungenye yezidingo zabaningi bethu. Siyakujabulela ukulalela izingoma ngezizathu ezahlukahlukene. Kunamadivayisi amaningi atholakalayo kithi akwazi ukusakaza umculo. Amathuluzi ambalwa awakwazi ukuxhasa amafomethi ambalwa. Ifomu le-m4a liqala ukungasebenzi nsuku zonke. Bambalwa kakhulu abadlali bemidiya abasekela le fomethi yefayela lomsindo. Idume kakhulu phakathi kwabadali. Kulesi siqondisi, sizokukhombisa ukuthi ungaguqula kanjani i-m4a ibe ngamafayela we-mp3. Kuya ngokujwayelekile. Ifomethi yefayela isekelwa kalula ngamathani abasebenzisi.
Kunamathani wezindlela ezahlukahlukene zokuguqula amafayela akho. Sizozama ukubakhombisa bonke ngalo mhlahlandlela. Ungasebenzisa amathuluzi aku-inthanethi naku-inthanethi ngokuya ngokulula kwakho. Inqubo edingekayo yokuguqulwa ihlala ifana nawo wonke umuntu. Nazi izinketho eziphezulu ongazisebenzisela izidingo zakho.
Kukhona amathani amawebhusayithi online anikezela ukuguqulwa kwamahhala. Ungazisebenzisa ukuguqula amafayela akho ngemizuzwana kalula. Ama-M4a noma amafayela alalelwayo ngokuvamile amancane ngosayizi uma kuqhathaniswa namanye amadokhumenti. Ithuluzi eliku-inthanethi lizokusiza ukuguqula ngokushesha ngaphandle kwenkokhiso. Nazi izinyathelo nokukhetha kwethu okuphezulu okufanayo.
Guqula i-Youtube ibe yifomethi ye-Mp3
Kulesi sigaba, sizosebenzisa i-website online converter. Izosisiza kakhulu. Abasebenzisi bangakulandela lokhu ukuqala ukuguqula amafayela alalelwayo.
Isinyathelo sokuqala ukuvakashela iwebhusayithi. Ungaqala ngokuchofoza kulokhu isixhumanisi . Iwebhusayithi inawo wonke amathuluzi adingekayo okuguqula noma yimuphi umbhalo ngqo.
Abasebenzisi kufanele bathole ifayela le-m4a kusuka kwikhompyutha yabo. Chofoza kunkinobho yefayela lokukhetha ukuze ulayishe idokhumenti yakho. Sicela ukhethe kusuka enkombeni yakho kumafolda.
Iwebhusayithi yokuguqula okuku-inthanethi ikwenza ukwazi ukuguqula amafayela futhi usebenze ngekhwalithi yomsindo. Abasebenzisi bangahlela i-bitrate yamafayela wabo alalelwayo. Kunezinketho ezahlukahlukene ezitholakala endaweni yesikhulumi. Sincoma ukusebenzisa inketho engu-320 Kbps. Ikunikeza ikhwalithi yomsindo ehamba phambili kukho konke ukulandwa kwakho.
Isinyathelo sokugcina ukuchofoza inkinobho yokuguqula. Abasebenzisi bangalanda ifayela kalula kumakhompyutha abo. Kuyinqubo eqondile engeke ithathe isikhathi sakho esiningi.
Siyethemba ukuthi ungawusebenzisa lo mhlahlandlela ukudlala amafayela alalelwayo kumadivayisi wakho kalula. Zama lokhu namuhla bese uthola umuzwa omuhle.
Kunezindlela ezimbalwa ezizokusiza uphume. Sizobangeza ohlwini ukuze ukwazi ukuguqula amafayela kahle. Nawa amawebhusayithi ahlukile aphezulu.
I-Zamzar iyiwebhusayithi elula ukuyisebenzisa enikeza izinzuzo zokuguqulwa kwefayela. Kuyinto yesikhulumi esihle kakhulu sokuguqula noma yini eku-inthanethi. Siyincoma kubo bonke abafundi bethu. Ungangeza kalula amafayela kusayithi bese uqala inqubo yokuguqulwa. Kunemikhawulo embalwa kusayizi wefayela lomsindo wakho. Iwebhusayithi ivumela abasebenzisi ukuthi bathole kuphela ukulayishwa kwamafayela angama-50MB.
Kulula ukuyisebenzisa futhi iza nesibonisi esihle kakhulu somsebenzisi. Inqubo yokuguqula nayo iyashesha. Iningi lamafayela alalelwayo lingaphansi kwemikhawulo esizeni. Ilungele ukusetshenziswa kwakho.
Iwebhusayithi ye-convertio nayo icishe ifane nezinye izinketho ezitholakala lapha. Iwebhusayithi ekusiza ekuguqulweni kwanoma yini nayo yonke into. Iwebhusayithi ikwenza ukwazi ukulungisa izilungiselelo. Kuyindlela enhle kulabo abafuna ukulungisa izakhiwo zomsindo. Ifomethi ye-M4A yifomethi yomsindo ecindezelwe.
Abasebenzisi bangashintsha i-bitrate, iziteshi zomsindo, kanye nezinga eliguquguqukayo / eliqhubekayo. I-interface yomsebenzisi iyasiza kakhulu kubasebenzisi. Kuzame namuhla ukuze ube nesipiliyoni esihle.
Iwebhusayithi inikezelwe kubantu abadinga usizo ngokuguqulwa komsindo. Yilapho kukhona umsebenzi othile wokuguqulwa kwe-m4a kuya ku-mp3. Isebenza kahle kakhulu futhi ayibangeli amaphutha amaningi. Kuyasiza futhi nasekuguqulweni kwamanye amapulatifomu alalelwayo.
Ungayizama namuhla futhi uthole isipiliyoni esihle. Isebenza kahle kakhulu ekuguqulweni kwefayela lomculo.
Indlela Yamathuluzi Okuguqula Okungaxhunyiwe ku-inthanethi:
Amathuluzi amaningi esoftware akusiza ngokuhlela umsindo. Lokhu futhi kuphelele ekuguquleni ifomethi yomsindo yedivayisi yakho. Nazi izinyathelo ongazama ngazo ukuguqula amafayela we-m4a abe yi-mp3.
I-Audacity ingenye yesoftware enamandla yokuhlela umsindo etholakala kwi-inthanethi. Kumahhala ngokuphelele ukusetshenziselwa wonke umuntu. Abasebenzisi bangazama futhi bahlole izinketho njengamanje. Ungavakashela isixhumanisi esilandelayo - https://www.audacityteam.org/download/ . Isoftware isebenza kumadivayisi weWindows, MacOS, neLinux.
Abasebenzisi badinga i-plugin ye-FFmpeg ukuguqula amafayela asuka kufomethi ye-m4a ayenze i-mp3. Kuyisidingo sabo bonke abasebenzisi bokuqina. Ungathola i-plugin yelabhulali kusuka ku- lapha .Kuyindlela elula yokufaka. Isebenza kumadivayisi we-MacOS ne-Linux futhi.I-Audacity ayikwazi ukuxhasa ngqo amafayela we-m4a. Kuyisizathu esenza ukuthi sidinge i-plugin ye-FFmpeg.
Abasebenzisi bangavula ifayela le-M4A futhi baguqule kalula ifomethi ngokusebenzisa amandla. Ungenza noma yikuphi ukuhlela kumsindo usebenzisa isoftware.
Abasebenzisi kufanele baye kumenyu yefayela. Lapha uzothola inketho yokuthumela ngaphandle ukuguqula ifayela libe yifomethi ye-mp3 kalula. Ungakhetha umkhombandlela wokugcina ifayili kukhompyutha yakho. Kuphelele kulabo abafuna ukugcina okuqukethwe.
Voila! Manje usungaguqula kalula amafayela ngedivayisi yakho noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ifomethi yefayela le-m4a iphelele kulabo abafuna ukunciphisa usayizi wefayela. Akusebenzi kahle kumadivayisi amaningi alalelwayo. Kulesi siqondisi, sikhombisa indlela yokuguqula amafayela we-m4a abe yifomethi ye-mp3 kalula. Yizame namuhla ukuzwa umculo omnandi nomsindo.
Amasayithi Omculo Avinjiwe 2020